Bofu rakaona vanhu semiti yaifamba. Uyu mucherechedzo wechii?
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Bofu rakaona vanhu semiti yaifamba. Uyu mucherechedzo wechii?
Bofu rakaona vanhu semiti yaifamba. Uyu mucherechedzo wechii?
Marko 8:22 Zvino wakasvika Betsaida; vakavuya nebofu, vakakumbira zvikuru kwaari, kuti amunyangate.
23 Akabata ruvoko rwebofu, akamuisa kunze kwomusha, ndokupfira mate pameso ake, akaisa mavoko pamusoro pake, akamubvunza kana achivona chinhu.
24 Iye akatarira, akati: ndinovona vanhu, ndinovavona vachifamba vakafanana nemiti.
25 Zvino akaisa zve mavoko pamusoro pameso ake, iye akatarisisa, akaporeswa akavona zvose zvakanaka.
26 Akamuendesa kumba kwake akati: usatongopinda mumusha kana kuvudza munhu mumusha.
Betsaida zvinoreva kuti “imba yehove”. Uku ndiko kwaive naJesu.
Jesu akatora murume aive bofu akamuburitsa mumusha akatanga kumupa maonero emweya, zvatinodaidza kuti kuratidzwa, achibva azomupa maonero ake akanaka.
Iyi ndiyo yaive kiyi yekuva muredzi wevanhu. Muono wemweya wakadzama unoda kupihwa kumunhu. Mwari anoona sei zvinhu? Tinokwana papi mumuono mukuru waMwari wemweya.
Uku kwaive kubata kwaMwari kwekutanga kwakagamuchirwa nebofu. Ichi ndicho chaive chinhu chakanyanya kukosha pakuponeswa kwake, kuisa Mwari neBhaibheri pamberi. Kuchizotevera ruponeso rwenyama uye chipo chekugona kuzvitaririra. Asi izvi zvaizotevera zvakakosha zvadarika.
Nemaonero atinoita isu vanhu tose aikwanisa kuona vanhu vachisimudzira munhu kuti ave mutungamiri wavo pamweya. Izvi zvaive zvakaipa. Vatadzi vanofanira kuendeswa kuna Jesu kuti atonge muhupenyu hwavo. Kukanganisa kuri kuitwa nemakereke ndekwekuti vanotungamirira vatadzi kunaShe Jesu, zvino kana aponeswa, vanobva vaita kuti munhu uyu azvininipise kutsika nezvitendero zvekereke. Munhu atendeukira kunaJesu haazofaniri kuratidzwa kune mumwe munhuwo zvake, mutungamiri wekereke, anokwanisa kuvabatirira kana kuti kune imwe kereke inotarisira kuti vanhu vatenderane netsika dzekereke.
Zvino bofu zvarawana Jesu, akabuditswa mumusha kuti ribve pahutungamiri hwevanhu.
Musha wemunhu uyu waive usiri mumusha maaive. Musha wedu wechokwadi ndiro Denga, kwete zvimwe zvitendero zvakaitwa nevanhu.
Izvi zvakafanana nekunge muri musangano. Kutenderana nechero boka kunotipofomadza kubva pakuona zvakadzama zveBhaibheri Shoko raMwari. Tarirai kuti zviri nyore sei kuvanhu vemumasangano kufuratira Magwaro mazhinji vachiti haana kukosha. Panokurukurwa pamusoro peMagwaro akaoma kunzwisisa, vasikana vakapusa (vakadzi vakachena vanomiririra maKristu akaponeswa) vanogaroti, “tinotofanira kuzviziva here?” vobva vafuratira nyaya yacho. Vasikana vakachenjera vanoti “Tinofanira kutozviziva!” Nekuti Jesu, Shoko, ndiye murume wedu saka kana zviri muBhaibheri zvakakosha. Vasikana vakachenjera vanoda kuita basa rakaoma rekutsvaga mhinduro kubva kuchokwadi. Vasikana vakapusa vanehusimbe. Havadi kuti kusaziva kwavo kuburitswe pachena. Vanotya kuziviswa kukanganisa kwavo, sezvo nekusaziva vanotya kuti pamwe vane zvavanotenda mazviri zvakawanda zvakaipa. Saka munhu akarara, kana mukaedza kumumutsa, anongoti, “Ndisiyei”.
Hakuna chinhu chinonzi Magwaro asina kukosha. Hakuna chinhu chinonzi iri vhesi reBhaibheri siyanai naro. Vhesi rimwe nerimwe rinobata basa raro “Mumuono Mukuru waMwari”.basa redu nderekuramba tichitsvaga mhinduro.
Dzidziso dzinobva muMagwaro dzinopa simba.
Hatigoni kuva takarurama kana tiine Magwaro atinofuratira.
Zvese zvakanyorwa muBhaibheri zvakakoshera
“Kutiraira”, zvichitiudza kuti takanganisa papi.
“Nokururamisa” zvichitiudza zvakaipa zvatinotenda mazviri.
“Nokuranga kuri mukururama”, zvichitiratidza kuti tingagone kufanana naKristu sei zvese pamararamiro uye paruzivo rweMagwaro.
Jesu paakamupa maonero ake, aifanira kutanga amubuditsa mumusha, akabva amuudza kuti asadzokere mumusha imomo sezvo waive usiri musha wake wechokwadi. Kana Mwari akazarura meso edu, anofanira kutanga kutibvisa kuzvitendero netsika dzemasangano, nekuti ndizvo zvakambotipofomadza pakutanga. Hazvizobatsiri kuzodzokera kuzvitendero zvemasangano sezvo zvinozoramba kuenderera mberi kwekuziviswa kwezvakavanzika zveMagwaro.
Mufananidzo wevasikana vane gumi unotaura kuti vese vaive vakarara. Mukadzi mucherechedzo wekereke. Saka makereke edu ese ari panyika akarara. Saka pane chinhu chisina kumira zvakanaka muzvimiro zvemakereke edu. Tese tinofanira kumuka pachinhu ichocho.
Apa Jesu ari kushanda nemunhu mumwe nemumwe, kwete neboka. MuRaodikia, nguva yekereke yekupedzisira, akamira panze pemukova wekereke achigogodza kumunhu mumwe nemumwe ari mukereke angade kumuterera zvake. Pakupedzisira, kukosha kuri pamunhu mumwe nemumwe akazvimiririra vanoterera nekuteveera zvinotaurwa neMagwaro. Kwete masangano emakereke anoterera tsika nemitemo yemakereke avo uye mazano evanhu vanovatungamirira.
Ngativerengei kutsanangurwa kwakaitwa chiitiko ichi neBhaibheri zvakare:
Mate anomiririra maziso emunhu achiwaniswa chizoro kana mushonga unoita kuti agone kuona zvinobva pamuromo waMwari. Tinofanira kubvunza kuti tiratidzwe pakanyorwa dzidziso imwe neimwe muMagwaro, sezvo Shoko raMwari chete ndiro rinobva mumuromo maMwari.
Marko 8:24 Iye akatarira, akati: ndinovona vanhu, ndinovavona vachifamba vakafanana nemiti.
“Akatarira”. Zvichiratidzira chinhu chinoonekwa kubva kudenga. Akaona muono wemweya sezvo Mwari achiona zvinhu nenzira yepamusoro-soro. Aya aive maonero akasarudzika. Akaona mweya yevanhu, pachinzvimbo chekuona miviri yavo yenyama.
Tiri kurarama munyika yezvikamu zvitatu. Hatizivi kuti “nguva’ chii, nekuti nguva chikamu chenzvimbo yechina inosanganisira nzvimbo yemweya yezvakanaka nezvakaipa.
Marko 8:25 Zvino akaisa zve mavoko pamusoro pameso ake,iye akatarisisa, akaporeswa akavona zvose zvakanaka.
Bofu raive ratevera Jesu rasiya zvehupenyu hwaro.
Mubairo wake waive muonero wemweya wakadzama wekuti vanhu vaive musanganiswa wezvakanaka nezvakaipa saka nekudaro vaikwanisa kwazvo kumunyengera nemasangano ezvitendero zvavo.
Zvino Jesu akabva amudzorera maonero ake akanaka. Maitikiro akaita zvinhu apa anoratidza kuti maonero edu emweya akakosha kudarika maonero edu enyama. Asi isu vanhu tinoita setinokoshesa kugoverwa kwatinoitwa naMwari zvinhu nepfuma pachinzvimbo chekugoverwa kwekunzwisisa zano raMwari kurudzi rwevanhu. Tinotanga kutarisa pakereke chekutanga kuti chii chakanaka chainoita. Kutiita kuti tiponeswe nekutipa ruwadzano, kunamata uye rubatsiro kupfurikidza zvatinenge tichishaiwa. Kereke yava nzvimbo yekuchengetedzeka musi weSvondo kwatinonzwa nekuzvisimbisa kuti kuenda kukereke nguva dzese mune imwe kereke ndiyo kiyi yekukunda kwedu kuenda kuDenga. Kereke dzinotodzidzisa kuti tingakure sei sevanhu tichirarama hupenyu hwakanaka semaKristu. Izvi zvese zvakanaka. Asi mukuchengetedzeka kwedu ikoko tinoshaiwa hanya nezvakaipa zvinodzidziswa mumakereke. Izvozvi kwave nemasangano anosvika 45000 akasiyana-siyana emakereke – ese anotenda mune zvakasiyana. Tinozvinyengera tichiti kereke yatakasarudza ndiyo yakanaka. Mungori nemukana mumwechete pamikana 45000 yekuva iri sarudzo yakanaka yatakaita. Hazvikurudziri zvachose.
Marko 8:26 Akamuendesa kumba kwake akati: usatongopinda mumusha kana kuvudza munhu mumusha.
Munhu uyu aive asingabvi muguta iri. Testamente Itsva haina kubvira yatanga sangano rekereke rine zita. Mapoka aitangwa, vose zviri nyore kwazvo vobva vadekara kune zvavaitenda nekudzikisira vanhu vachivaisa pasi pemufundisi kana kuti pasita akasimudzirwa kuita mutungamiri wekereke kana musoro wekereke. Kana Mwari akazarura maziso enyu, kereke yakakuchengetai muri mapofu mairi haizogoni kugamuchira zvamunenge makukwanisa kuona.
Jesu ega ndiye musoro wekereke. Ndiye Shoko -- Bhaibheri. Nzira yaunonzwa nayo pamusoro peBhaibheri ndiyo yaunonzwa nayo pamusoro paJesu.
Muviri wevatendi, kereke yechokwadi, unokwanisa kuponeswa naJesu chete. Kwete neumwewo munhu, zvisinei nekuti ane mbiri zvakadii.
Vanhu vanotungamirira makereke vanodakara musimba ravo nekukasika, varasikirwa nekuona chinangwa chikuru chinova kutsvaga chokwadi.
Kunzwisisa zvakavanzika zveMagwaro ndihwo humbowo hwerubapatidzi rweMweya Mutsvene.
Kunzwisisa ndiro simba rekugona kuyananisa zvawanzwa, zviri mumavhesi akasiyana-siyana muBhaibheri, pamwechete.
Saka nei Mwari akashandisa muti semucherechedzo wemweya emunhu?
Chinhu chararama kengvuva yakarebesa panyika muti weBristlecone pine unowanikwa kuAmerica.
Uyu wakada kutoita semuenzaniso wehupenyu husingaperi. Muti wezera iri unofanira wakabva kure kunguva yeMvura yaNoa chaiyo.
Mwari aida mucherechedzo weHupenyu husingaperi. Saka akasarudza muti nekuti ndiwo chinhu chinorarama wararama kudarika zvese zvinorarama pasi pano.
Muti hweHupenyu mucherechedzo waJesu Kristu.
Muti weHupenyu ndiwo tsime reHupenyu husingaperi.
Kune tsime rimwechete chete reHupenyu husingaperi – Jesu Kristu.
1 Johane 5:20 Tinoziva kuti mwanakomana waMwari wakavuya, akatipa kuziva, kuti tizive iye wazvokwadi; nesu tiri munaiye wazvokwadi, mumwanakomana wake Jesu Kristu. Ndiye Mwari wazvokwadi, novupenyu bwusingaperi.
Saka Muti weHupenyu waive mucherechedzo weMweya waJesu Kristu.
Hushumiri hwaJesu hwakanyorwa pakati peBhaibheri mumaBhuku mana eEvangeri anobatanidza Testamente Yekare neTestamente Itsva pamwechete. Saka Jesu ndiye akakosha muBhaibheri rese.
Nenzira imwechete iyi Mweya waJesu ndiwo waive Munhu wepakati mumunda weEdeni. Kristu ndiye aive akakosha pazvinhu zvese muEdeni.
Asi pakarepo, Adamu paakaita chivi, Muti weHupenyu wakabva wasuduruka kuenda kumabvazuva kwemunda weEdeni, kunoita Mukova uyo vatsvene vanotendeuka vanozoshandisa kupinda nawo kuti vagone kudzoka pamberi paMwari.
Genesisi 3:24 Naizvozvo akadzinga munhu, akaisa makerubi kurutivi rwamabva­zuva rwomunda weEdheni, nomurazvo womunondo waimonereka kumativi ose, kurindira nzira yomuti woupenyu.
Muti watinoziva chaiwo hauna nzira. Unogara wakangomira panzvimbo imwechete. Muti weHupenyu ndiwo Mweya waKristu unofamba kubva pakati pemunda weEdeni kuenda kumuganhu wekumabvazuva kunoita Mukova kuti anoitira vanhu vakazara zvivi nzira yedzikinuro.
Johane 14:6 Jesu akati kwaari: Ndini nzira, ...
Isaya 37:16 "Haiwa JEHOVA wehondo, Mwari waIsiraeri, iye ugere pamusoro pamakerubi! Ndimi Mwari, imi moga, woushe hwose hwenyika, ndimi makaita kudenga napasi.
Mwari aigara pakati pemaKerubi. Saka makerubi kumabvazuva kwemunda weEdeni aive akapoteredza Mweya waMwari. Nemamwe mazwi Muti weHupenyu waive mucherechedzo weMweya waMwari.
Asi Jesu ndiMwari.
Johane 20:28 Tomasi akapindura, akati kwaari: Ishe wangu, naMwari wangu!
Asi kwaive nemumwe muti, waimiririra mumwe mweya. Mweya wekuziva zvese zvakanaka nezvakaipa.
Tinorarama munyika yezvikamu zvitatu. Pachidanho chepamusoro-soro kune nzvimbo yechina inosanganisa zvese nguva nemweya. Ndicho chikonzero nei tisingazivi kuti nguva chii, kana kuti hupenyu chii, kana kuti ndangariro chii. Zvese chikamu chenzvimbo yepamusoro isingaonekwi nemeso edu. Iyi ndiyo nzvimbo yeruzivo rwezvakanaka nezvakaipa zvinokurudzira mafungiro evanhu.
Tinokwanisa kuyanana nenzvimbo iyi nendangariro dzedu.
Zvematongerwo enyika zvakaipa, zvinotongwa nevanhu vazere zvivi vari pasi paSatani. Mambo weTire aive munhu aishandiswa naSatani achipinda maari, sekupinda kwaakaita muna Judasi kuti atengese Jesu.
Ruka 22:3 Zvino Satani wakapinda kuna Judhasi wainzi Iskarioti, mumwe wavanegumi navaviri.
Ezekieri 28:12 "Mwanakomana womunhu, itira mambo weTire mariro, uti kwaari, zvanzi nalshe JEHOVA, `Iwe wokuisa chisimbiso chako pachiyero, uzere nohuchenjeri, hwakakwana pakunaka.'
13 Wakanga uri paEdeni, mumunda waMwari;
Mambo weTire haana kubvira asvika paEdeni. Ezekieri aitaura nezvaSatani aigara mundangariro uye kutonga ndangariro dzamambo uyu muhushe hwake hwezvematongerwo enyika.
Saka muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa waive mucherechedzo wemweya waSatani aive muEdeni kuti akurudzire Adamu naEva kuti varwise hurongwa hwaMwari nekuvodza shoko raMwari nekurishandura.
Satani, aimbozivikanwa nekunzi ‘ngirozi yechiedza”, kana kuti Rusifa (nyamasase) akawa kubva kudenga inova nzvimbo itori pamusoro-soro kwazvo yemweya ine zvakanaka chete. Ndicho chikonzero nei Rusifa akakandirwa pasi paakatadza.
Sezvo aimbova munzvimbo yepamusoro-soro, Satani akachenjera kwazvo pamafungiro ake. Kana mukamupikisa nekuchenjera kwenjere dzenyu, anokusungai mupfundo dzake. Chinhu chimwechete chinogona kukurira Satani ndepamunotaura zvakanyorwa muBhaibheri Shoko raMwari. Munokurirwa kana mukavimba netsika dzakaitwa nevanhu nemazano avo.
Pazuva rechitatu, Mwari akaita miti yese yemichero yakanakira kudya. Saka kwaive kusina muti wemuchero waikwanisa kukanganisa Adamu naEva.
Hakuna chinodyiwa nemunhu chingamuipisa. Saka kudya chimwe chinhu hachisi chivi.
Marko 7:15 Hapanechinhu kunze kwomunhu chingamusvibisa, kana chichipinda maari; asi zvinobuda maari, ndizvo zvinosvibisa munhu!
Mateo 15:10 Zvino akadana vanhu vazhinji kwaari, akati kwavari, tererai munzwisise.
11 Izvo zvinopinda mumuromo, hazvisvibisi munhu asi zvinobuda mumuromo ndizvo zvinosvibisa munhu.
Hakuna chekudya chinopinda mumuromo chakaipa. Mashoko anobuda mumuromo medu ndiwo akaipa. Ndicho chikonzero nei tichifanira kudzidzisa zvakanyorwa muBhaibheri chete – anenge asiri mashoko edu.
19 Nokuti hazvipindi mumoyo make asi mudumbu, zvichirashwa kunze; nokutaura kwakadaro wakanatsa zvokudya zvose
20 Ipapo akati: Zvinobuda mumunhu ndizvo zvinosvibisa munhu.
21 Nokuti mukati, mumoyo yavanhu munobuda mifungo yakaipa, novupombwe, nokuba, nokuvuraya.
22 Novufeve, noruchiva, nokuipa, nokunyengera, novutere, neziso rinegodo, nokutuka, namanyawi, novupenzi;
23 Zvakaipa izvozvo zvose zvinobva mukati, zvinosvibisa munhu.
Mifungo yakaipa inobuda munzvimbo yepamusoro isingaonekwi nenzvimbo yakavanzika yechina, nzvimbo yenguva neweya uye kuziva zvakanaka nezvakaipa. Ndangariro dzedu, nekuti mweya, dzinogona kuyanana nenzvimbo yemweya yepamusoro iyi nzvimbo yechina uye dzinokurudzirwa nemazano anotenderera imomo. Zvakaipa zvakaputirwa munzvimbo yenguva iyi, rimwe zuva nzvimbo yechina yenguva nezvakaipa iyi ichadarika. Kusvikira paichagumiswa icharamba ingori tsime rekunyengera kuti itibire hukama hwedu naMwari, sezvayakaita kuna Adamu naEva.
Muti unokwanisawo kushandiswa semucherechedzo wehupenyu hwemunhu, unova mweya wemunhu.
Zvinotora kushanda nesimba kukuru kwazvo, kazhinji kusingaonekwe, kuti hupenyu panyika huenderere.
MaJuru, hutachiwana wefangasi, manyongorosi, masvosve, nehutachiwana hwakawandisa zvakakoshera nzvimbo dzedu.
Munogona kunge mutori nehupenyu huzhinji husingaonekwe muvhu kudarika huri pamusoro pevhu. Izvi zvose zvakakoshera kugadzira ivhu kuitira kuti zvirimwa nezvinomera zvese nemiti zviwane kudya kwakakwanira kubva kuvhu. Huremu hwezvinorarama zvese panyika hunokwanisa kuva hwakatongofanana nehuremu hwehutachiona hwatisingaoni hunogara muvhu nemuzvinhu zvese zvinorarama.
Izvi zvinoratidza kuti basa zhinji rekuparidza Evangeri nekugadzirira vanhu Kuuya kwaShe rinoitika kusingaonekwe munzvimbo dzakaninipiswa. Makereke anhasi akazara nezvinovaraidza, hunyanzvi uye mimhanzi yemadhisiko. Vanokoshesa zvinhu zvakanaka, kwete kukosha kwezvavanoita. Asi hupenyu hwese hunoonekwa pamusoro penyika hunotovimba nezviitiko zvehupenyu hunoitika pasina anoona pasi pevhu.
MuchiKristu chanhasi chemakwikwi, makereke anoedza kukundana muzvikamu zvekuwanda kwavo nepfuma yavanoita.
Pakupedzisira kwehushumiri hwake, Jesu nevadzidzi vake gumi neumwechete vekutanga, mbongoro yekukwereta, imba yepamusoro yekukwereta, guvo neguva rekukwereta. Maitiro ake aive akatosiyana nemaitiro anoitwa nemapasita edu anhasi ane nzara yemari.
Pavairwisa guta maJuda aisatenderwa kutema miti.
Deuteronomio 20:19 "Kana ukakomba guta nguva refu, uchirwa naro, kuti urikunde, haufaniri kuparadza miti yaro, uchiitema nesanhu; ungaidya, haufaniri kuitema; nokuti muti womusango munhu here, kuti ukombwe newe.
Pano Mwari anofananidza muti nehupenyu hwemunhu kana nemweya wemunhu.
VAROMA 8:10 asi mweya mupenyu nokuda kwokururama
MaRoma vari pasi pemubati Tito pavakaparadza Jerusama muna 70 AD, vakatema miti yese yaive yakapoteredza Jerusarema pamakiromita anodarika gumi nemasere, vakaita nzvimbo iyoyo renje. Ndicho chikonzero nei Jesu akavadaidza kuti nyangadzi inoparadza.
MAPISAREMA 1:1 Akakomborerwa munhu asingafambi panorangana vakaipa, Asingamiri panzira yavatadzi, Asingagari panogara vadadi.
2 Asi anofarira murayiro waJEHOVA; Anofungisisa murayiro wake masikati nousiku.
3 Achafanana nomuti wakasimwa pahova dzemvura, Unobereka michero yawo nenguva yawo, Mashizha awo haasvavi; Chinhu chipi nechipi chaanoita chichaendika.
Kana mvura dzichitaura pamusoro pemweya waMwari zvino mufananidzo uyu wemunhu anotevera Magwaro, anowana hupenyu hwake kubva muMweya waMwari, ndiwo mufananidzo watinofanira kutevera zvakazara. Munhu uyu anotenda muna Mwari muzvinhu zvese.
39 A`si izvi wakareva zvoMweya, ....
Nei muti uri mufananidzo wakakosha wemweya wemunhu? Fungai nezvevanhu vasati vaponeswa.
Nekuti chero muti wakafa (unomiririra mweya usati waponeswa) unoramba wakamira.
Muti uyu haungonyangariki. Unogona kumirapo kwemakore mazhinji mumashure mekufa kwawo.
Muti wakafa uyu unova mucherechedzo wemunhu asina kuponeswa. Vakafa pamweya ivo vari vapenyu panyama. Kana vazofa panyama, mweya yavo inoramba ichirarama munzvimbo dzevakarasika, vakamirira zuva rekutongwa uye dziva remoto nekuguma kwenguva.
Muti wakafa haumere mashizha. Saka munhu akaona “munhu semiti” aizokwanisa kuziva kuti uyu mweya wemunhu asina kuponeswa.
Asi kana akaona mumwe munhu aionekwa semuti waive nemamwe mashizha akasvibira.
Ipapo aizoziva kuti munhu uyu aive akaponeswa asi asati azadzwa nemweya. Kuponeswa kunoreva kuti munhu akatendeuka kuzvivi zvake akagamuchira Jesu seMuponesi wake.
Ruponeso zvinoreva kunatswa kubva kuzvivi zvese zvenguva yakadarika, asi izvi zvinongotanga chete basa rekuita kuti munhu ave akafanana naKristu. Kristu anopa mugove weMweya wake Mutsvene mumoyo yedu hupenyu hutsva hwotanga matiri. Asi kunobva kwauya dambudziko apo hunhu hwedu hwekare hunofanira kufa ihwo hworamba kufa. Nenzira imwechete yamunoramba nayo kana mumwe munhu akaedza kukuurayai.
Makaro evanhu nekutadza zvinodzorwa neruponeso asi hazvibviswi zvachose saka zviri nyora kutungidzika zvakare. Kuzvipira kwakakura kunodiwa, kufa pakuita kuda kwedu.
Muti uyu une hupenyu sezvo uchimiririra munhu akaponeswa asi uchiri nerwendo rukuru rwekuenda, huchiri kuda hutsvene uye rubapatidzo rweMweya pakupedzisira zaruriro yezvakavanzika zviri muBhaibheri kuti munhu iyeye awane nzvimbo yake muMuviri waKristu.
Pano tinoona mumwe munhu anoratidzika semuti. Asi muti uyu une mashizha akasvibira akawanda nemapazi akafa mashoma.
Nhanho yepiri pakuuraya zvido zvedu hutsvene apo rudo rwekuita zvakaipa runobviswa. Izvi zvinopa “kuda kwedu” simba shoma kwazvo munzira yatinenge takurarama hupenyu hwedu nayo. Izvi zvinobereka shanduko inoonekwa pahupenyu hwemunhu. Tinomira kubhema, kunwa hwahwa, kutamba njuga, kurwa, kunyepa, kuba, kutuka, kuita majee akaipa, kupfeka mbatya dzinoonesa miviri, kuita zvepabonde kunze kwewanano nezvimwe zvakadaro.
Zvino muti unomiriririra hupenyu hwedu kana mweya yedu unenge wanyanya kusvibira. Uchiratidzika uri mupenyu zvakanyanya.
Kunobva kwauya rubapatidzo rweMweya Mutsvene apo Jesu anotora hupenyu hwedu zvakazara. Zvibereko zveMweya zvinenge zvakunyanya kuonekwa.
Mufananidzo uri pamusoro apa unomiririra munhu akazadzwa neMweya anoratidzira zvibereko zveMweya.
Uyu muti unoratidza kuti une hutano asi hausati wasvika kumapeto kwenzira. Uchiri nemapazi akafa anoratidza kuti munhu uyu haasati akuziva zvakavanzika zvakavanzwa muBhaibheri.
Nei dzinza raJesu kubva kuna Davidi kusvika kuna Josefa muBhuku raMateo riri nemazera mashoma nemazera gumi nematatu, uye mazita akasiyana, kubva kudzinza rakataurwa kuna Ruka? Mubvunzo uyu unobvunzwa nevaya vasingatendi kuti “vaburitse Pachena” kuti Bhaibheri rinozvirwisa. Ese madzidza aya aitsanangura dzinza reropa rainogumira muna Messiasi. Nei kuine madzinza eropa raJesu maviri? Tinofanira kugona kudavira vasingatendi pamibvunzo yakaita seiyi.
Mateo akangotaura pamusoro pemutumwa mumwechete mubwiro raJesu. Ruka akataura pamusoro pevaviri. Vari kuedza kutiudza kutii?
Tinobva tazoona muti wakazara mashizha akasvibira usina mapazi akafa.
Muti uyu kana munhu iyeye anoziva kuti nei Mweya Mutsvene wakauya. Wakavinga kuzotitungamirira muchokwadi chese.
Humbowo hwerubapatidzi rweMweya Mutsvene kugona kunzwisisa Shoko raMwari.
Paakabvunzwa pamusoro pekuparadzwa kweTembere uye zviitiko zvenguva yekupedzisira, Jesu akapa yambiro huru imwechete.
Chinhu chikuru chinotikanganisa kuti tirege kuva takagadzirira Kuuya kwaShe kunyengerwa. Tinonyengerwa zviri nyore, sezvakaitwa Eva, kuti tirambe Magwaro tichitambira mazano evanhu.
Saka Jesu akapa bofu chipo chekuona musiyano. Hakuna aizogona kumunyengera.
Kana tikagona kuona musiyano uri pakati peShoko raMwari rakanyorwa nemazano evanhu nemafungiro avo, ipapo tinenge takugona kurarama tiri munzira yakanaka.
Chii chinoisa musiyano pazvidanho zvitatu zvekukura kwemuKristu izvi?
Hudzamu hwemvura iri parutivi pepakamira muti.
5 Shure kwaizvozvo akayera mamita ane chiuru chimwe; zvino rwakanga rwava rwizi, rwandakakoniwa kuyambuka; nokuti mvura yakanga yakwirira, yava mvura mungashambira munhu, ruri rwizi rusingabviri kuyambukwa.
6 Akati kwandiri, "Mwanakomana womunhu, waona chinhu ichi here?" Zvino akaenda neni, akandidzosera kumhenderekedzo yorwizi.
7 Ndakati ndadzoka, ndikaona pamhenderekedzo yorwizi miti mizhinji kwazvo uno nemhiri.
Mwari ane hudzamu huna hwemvura (zvinomiririra dzidziso neMweya) zvaanoshandisa kudzosera kereke yake pane zvayaive pakutanga.
MuKristu mumwe nemumwe ane simba rekuzvisarudzira kuti apinde mumvura pahudzamu hwesarudzo dzake.
Uyu munhu akatendeuka akagamuchira Jesu seMuponesi wake. Vanofara muhupenyu mumvura dzisina kudzika dzinosvika pazviziso zvemakumbo mavanogona kuchapura mvura muMagwaro akareruka anotaura pamusoro perudo rwaMwari neruchengetedzo rwake. Havafaniri kuenda kure nemahombekombe ezvenyika erwizi uye vanongokwanisa kudzokera pazvido zvavo zvemunyika nemapfekero avo enyika. ChiKristu chinhu chitsva uye chinofadza kwavari asi vanenge vasina kunyanya kubviswa zvakanyanya pamararamiro avaiita nguva yese yadarika. Mvura yacho haina kudzika zvachose uye vanokwanisa kufamba mairi zviri nyore vachienda kwese kunodiwa kuti vaende nezvido zvesarudzo dzavo. Jesu anenge ari Muponesi wavo kwete Ishe wavo. Vanoda kuti avaponese kubva kuzvivi zvavo asi havadi kuti avaudze kuti vorarama sei kana kuti vopfeka sei. Vanoda rusununguko rwavo rwekuita zvese zvavanoda vasina chinovaisira muganhu.
Mvura inosvika muzviziso zvemakumbo haigoni kukusairirai kuenda kune chero rutivi zvarwo. Saka Mwari anenge asina kutonga kwakakura pamusoro pehupenyu hwemaKristu iwayo. Vanenge vachiri vakasununguka kuita zvinhu zvavo nenzira dzavo dzavanoda.
Munhu uyu ari mumvura iri kusvika mumabvi ake. Zvati omei kuti afambe nenzira yaanoda iye. Mvura inenge yakasvika mumabvi haigoni kukumanikidzai kuenda nerutivi rwairi kuenda iyo. Uhu ndihwo hudzamu hwekupedzisira hwemvura mamunokwanisa kunge muchiri kutonga mafambiro enyu. Zvakare, munhu haaende kure zvakanyanya nemahombekombe erwizi hunova hupenyu hwezvenyika hwavairarama pavakaponeswa. Zvisinei nekunge vane hupenyu hutsvene, vachiri kuda kudzokera kumahombekombe erwizi vachitenderana nenyika mune zvimwe zvinhu zvakaita sekunwa hwahwa, mapfekero enyika, shangu dzakakwirira, mutauro wakaipa, mari inowanikwa nenzira dzakaipa nezvimwe zvakadaro. Asi vanenge vafamba rwendo rurefu muzvikamu zvezvinhu zvakawanda zvavanenge vasiya kuita.
Asi nekuti mvura yakadzika, hazvisi nyore zvakanyanya kuti vafambee vachitenderera madiro avo nemusarudzo dzavo.
Manzwiro avo anenge akutanga kuvadzora kana kuvaisira miganhu pane zvimwe zvinhu.
Saka Mwari enenge ane kutonga kwakati kurei pamusoro pehupenyu hwavo.
Muti werubapatidzo rweMweya Mutsvene.
Munhu anenge akusvikirwa nemvura muchivuno mune hupenyu. Mweya waJesu ndiwo unenge wakunyanya kutonga hupenyu hwake. Kana mvura ikaerera zvakasimba ichisvika muchivuno, inogona kueredza munhu akatadza kutsika netsoka dzake. Saka Mwari anenge ane rusununguko rwakakura kuti afambise munhu iyeye mumvura. Zvakaoma kuti munhu afambe achienda kure kubva mvura kana mvura yadzika kusvika muchivuno make. Munhu uyu anenge ane ndangariro dzemweya zvakanyanya. Vanotarisa kuri kuenda mvura murwizi (kuda kwaMwari) pachinzvimbo chekutarisa kumahombekombe erwizi (nyika inokwezva moyo yedu nekuda kwesarudzo dzemoyo yedu).
Muti unoratidzika zvakanaka nezvibereko zveMweya. MuKristu uyu ava pedyo nekuzadziswa. Asi muti uchiri nemamwe mapazi akafa. Havanzwisisi zvakavanzika zvakawandisa zveBhaibheri. Kusaziva Bhaibheri idambudziko guru mumakereke.
Mateo 24:24 Nokuti vachamuka vanaKristu venhema navaporofita venhema vacharatidza zviratidzo zvikuru nezvinoshamisa kuti kana zvichibvira vatsause navasanagurwavo.
Kusaziva zvakavanzika zveMagwaro kunoita kuti satani anangane nesu zviri nyore kuti atinyengere. Chinhu chimwechete chinomutadzisa iShoko rakanyorwa. Saka kana tisingazivi kana kuti tichifuratira zvimwe zvikamu zveMagwaro, tinorasikirwa nechombo chedu chimwechete chinogona kukurira Satani.
Muti unomiririra muKristu akadzoserwa pakunowana nzvimbo yake muMuviri waKrsitu kana muZano reShoko raMwari.
Kune makereke anosvika 45000 emazuva ano akasiyana-siyana ekusarudza kubva kwaari. Musiyano unoita seusingagumi wezvitendero. Saka pane chinhu chisina kumira zvakanaka zvachose. Chinhu chinokosha chinokwanisa kuva nemuKristu chete nhasi kudzoserwa pakutenda kweTestamente Itsva.
Munhu uyu anonzvera Bhaibheri kuti ave nekunzwisisa kwakadzama zviitiko zvenguva yekupedzisira. Kereke yeRaodikia haipisi kana kutonhora uye marutsi mumuromo waMwari. Ibofu, yakashama, inenhamo, nevurombo. Nemapasita ari misoro yemakereke, musoro wechokwadi Jesu akarambwa mumakereke saka amire pamukova wekereke. Anogogodza kumunhu mumwe nemumwe. Saka munhu uyu anotanga kutuhwinha achibva kumahombekombe erwizi. Achibva kumazano evanhu netsika dzekereke. Mvura inenge yadzika. Kana zvakavanzika zvikazarura Magwaro, Magwaro akawanda anotanga kuzivikanwa. Nei Jesu akatasva mbongoro yaive mwana wembongoro? Chii pamusoro pekushambidzwa kwetsoka chaisanzwisiswa naPetro? Aiziva pamusoro pekuzvideredza uye kusuka tsvina kubva mutsoka pavaipinda mumba. Asi izvi zvose zvaive zvaitwa kare sezvo Jesu akashambidza tsoka dzavo vapedza chirairo, kwete pavakapinda mumba umu. Chakavanzika chikuru chaifanira kudzidzwa naPetro chaive chei?
Mufananidzo wevasikana vane gumi (vakadzi vakachena vanomiririra maKristu akaponeswa) unoti vasikana vese vaive vakarara vakakotsira kusvikira panguva yekupedzisira, saka maKristu ese ari kuitwa kuti agare akakotsira nemakereke avo. Pasita mumwe nemumwe anosimbisa vanhu vanomutevera kuti vari pakanaka kana vachiuya kukereke nguva dzese vachitenda mune zvaanodzidzisa. Vachivaraidzwa nekunzwa vakachengetedzeka, vese vanorara vokotsira.
Chii chichavamutsa vose?
Masangano emakereke 45000 akasiyana. Rimwe nerimwe rinoti rinogona rine chokwadi. Asi ese akasiyana. MuKristu mumwe nemumwe achitenda kuti kana vakabatirira nekuzvininipisa mukereke yavanosarudza , zvese zvichavaitira zvakanaka. Vese vanotya kupikisana napasita wavo. Asi mapasita kubva mumasangano 45000 akasiyana vanotenda muzvinhu zvakasiyana kwazvo. Saka nyika yemakereke iri kudzorwa kupinda “mushizha remuwonde” risina kudzika zvachose pakuchengetedzeka. Vese vakaponeswa kana vasina, vanongotsvaga kereke umo mavanonotenda zvinovaitira. Chero muchiuya mukereke musi weSvondo vhiki rimwe nerimwe, munenge muri pakanaka. “Kuenda kukereke” nguva dzese ndizvo zvakakosha chete kwavari. Zvamunotenda hazvina kukosha sezvo makereke akawandisa ane zvitendero zvakawandisa zvakasiyana uye tsika dzavo.
Zvakadaro chitendero chakakoshesesa chikuru mukakereke nhasi uno kupemberera Kisimusi. Izwi rekuti “Kisimusi” nezuva racho 25 Zvita hazvisi muBhaibheri. 25 Zvita izuva repakati penguva yechando apo muIsraeri munenge muchitonhora zvakaipa munguva dzehusiku. Hakuna vafudzi vanobuda nemakwai avo kuenda kumafuro nguva dzeusiku pakati penguva yechando. Hatina kubvira taudzwa muBhaibheri kuti tipembere kuzvarwa kwaKristu. Vazivi havana kubvira vaenda nezvipo zvavo kuchidyiro kwakazvarirwa Jesu, vakaenda vakanopinda mumba mavakanoona Jesu aive asisiri rusvava, asi aive atove mwana wemakore anoda kuita maviri.
Mateo 2:11 Vakapinda mumba, vakawanaMwana naMaria mai vake, vakawira pasi vakamunamata, vakasunungura fuma yavo, vakamupa zvipo zvendarama, nezvinonhuwira nemura
Mugore 274 AD muurayi akaipa wemaKristu uye mubati weRoma Aurelian akaita 25 Zvita zuva rakazvarwa mwari wemapegani wezuva, zuva risingakundike (Sol invictus). Mwari wezuva aive akurira vemakereke vazhinji nemuti wake wakashongedzwa unonzi neBhaibheri tisatevedzere, muhori nemuivhi. Mweya wechipegani uchiri kurarama wakasimba muchitendero chechichechi-chechi. Hazvishamisi kuti nei Bhaibheri richiti nguva yekereke yekupedzisira yeRaodikia ibofu.
Ruka Chitsauko 14 ine munhu aigadzirira chirayiro, chaimiririra chirairo chemuchato cheGwaiana.
Akatuma nhume kunokokera vanhu. Mwari anokokera maKristu akaponswa, kwete vatadzi kuti vauye kuDenga. Hapana mumwechete wemaKristu akakokwa aya akabvuma kukoka kwake. Mwari anokoka maererano neMagwaro. MaKristu ari mumakereke ari kukoshesa tsika dzekereke dzavasingadi kusiyana nadzo. Saka Mwari anoramba maKristu akaponeswa ese ari mumakereke. Hapana pakati pavo achakwira kuDenga pakutorwa kwekereke mukubwaira kweziso. Vachagadziriswa vouraiwa munguva yeKutambudzika kukuru uye havazovi chikamu cheMwenga wake. Uyu mufananidzo unotyisa kwavo.
Chakavanzika chikuru ndechekuti munguva yekupedzisira kereke ndiyo yava chipingaidzo chiri kutadzisa vanhu kunzwisisa Magwaro.
Saka munhu uyu ari kutuhwina achibva muchichechi- chechi achienda mumvura dzakadzika dzeMagwaro dzisingazomiri kuzivisa chokwadi. Hatigoni kuyambuka nemumvura idzi. Hakuna chimwe chinhu chisiri muBhaibheri chatinozoda.
Mukadzi muHedeni akakumbira rubatsiro Jesu ari pedyo neTire neSidoni. Jesu akamudaidza kuti imbwa kunova kutukwa kukuru, kunyanya kumunhukadzi. Asi tarirai mhinduro yake yaisatarisirwa.
Mateo 15:26 Akapindura akati, hazvina kunaka kutora chingwa chavana ndokuchikandira imbwanana.
27 Akati, hongu Ishe kunyange nembwananavo dzinodya zvimedu zvinodona patafura ravatenzi vadzo.
28 Zvino Jesu akapindura akati kwaari, haiwa mai kutenda kwako kukuru, zvaunoda ngazviitwe. Mwanasikana wake akapora kubva panguva iyo;.
Zaruriro huru yaive nemukadzi muHedeni yaive yei? Nei izwi rekuti “zvidimbu” kana mafufu raive chinhu chakakosha pakutaura kwake? Mukadzi muHedeni aitaura pamusoro pechokwadi chakadzama muhurongwa hwaMwari. Jesu akafadzwa nemaonero ake.
Mukadzi mucherechedzo wekereke. Mukadzi uyu aimirira kereke yevaHedeni. Aive nemuono wakadzama muShoko raMwari achiziva zano raMwari kuzuva rake. Saka Mwari anotarisira kuti maHedeni azive mavhesi eBhaibheri. Anotarisira kuti tive nemuono wakadzama muMagwaro.
Kana mukaramba muchingoti, “handizivi” kuzvakavanzika zveMagwaro musafunge kuti Jesu achafadzwa nemi.
Jesu paakataura nevadzidzi vake pamusoro pekupihwa zvekudya kwwevanhu zvuru zvishanu nezvuru zvina, aitarisira kuti vazive kuti nei paive nehuwandu hwematengu akataurwa emafufu akasaririra asina kudyiwa.
Munokwanisa kudavira here apa? Tinokwanisa kurangarira kuti matengu gumi nemaviri uye matengu manomwe emafufu akasaririra. Asi tinonzwisisa here zvinorehwa nekuverenga uku uye kuti chaive chii chaiedza kuudzwa ruzhinji naJesu paakaita minana iyi.
Mumufananidzo wadarika munhu ari kutuhwina. Kuwana nzvimbo yenyu muMuviri waShe chinhu chinoramba chichienderera mberi. Hamungagari modekara moti zvaita. Zvisinei nekuti mabva kure zvakadii naMwari, muchiri nerwendo rurefu rwekufamba.
Asi mvura dzakadzika dzine njodzi. Kana mukamira kutuhwina munonyura.
VaFiripi 2:12 .... pedzisai kuponeswa kwenyu nokutya nokudedera;
Kugadzwa muMuviri waKristu unorarama rwendo, kwete panoperera rwendo. Nekuti kunoramba kunezvizhinji zvinoda kuitwa. Nezvizhinji zvinoda kudzidzwa.
Rangarirai, miti inhengo dzakakosha muzviwanikwa zvepasi rino.
Miti inoita basa guru pakukonzeresa kunaya kwemvura mumasango anonaya mvura panyika. Akaiswa ruvara rwegirini.
Miti inounza mvura yedonhodzo pasi rese.
Midzi yemiti inokweva mvura kubva pasi mashizha ayo oburitsa mvura nenzira imwechete inodikitira vanhu kuti varambe vachitonhorerwa. Mvura yese inoraswa iyi inobatsira pakugadzirwa kwemakore anozoita mvura inonaya.
Mateo 5:45 Kuti muve vanakomana vaBaba venyu vari kudenga; nokuti vanobudisira vakaipa navakanaka zuva ravo, nemvura vanoinisira vakarurama navasakarurama.
Mvura makomborero. Mwari anotumira makomborero ake panyika kuvatendi. Mukuita uku vasingatendi vanowanawo makomborero aya. Saka vakarurama chikomborero kumunhu wese.
Semuenzaniso, kana Mwari aida kuti maKristu ari mumauto ahore mari yakawanda aizoita kuti hurumende iwedzere mauto ese mari yemuhoro wavo.
Miti inokweva mvura nemidzi yayo “yodikitira” kana kurasa mvura kuti ipe mvura iyi muchadenga zvinobatsira kugadzirwa kwemakore anozonayisa mvura. Kukwira kudenga kwemvura kubva mumashizha emiti kunoitawo kuti miti iyi ifurwe nemhepo.
Masango anonaya mvura anoshanda semasiponji makuru, anokwezva hunyoro hwakawanda, ohuburitsa zvakare zvishoma nezvishoma kuti nzizi dzirambe dzichierera mvura nguva dzechirimo uye anodzivirira kuwandisa kwemvura inenge yanaya. Uku kubatwa nekudzorwa kwemamiriro ekunze kunoitwa nemiti.
MaKristu, nemuenzaniso wavo, vanochengetedza hwaro hwepamusoro- soro hwekururama hunobatsira vanhu vose.
Nhasi miti yakakosha yemasango anonaya mvura iri kutemerwa pasi nevanhu nekuda kwemakaro avo.
Izvi zvinobva zvaderedza huwandu hwemvura inonaya.
Nhasi vakarurama vari kurwiswa nekuda kwekumira kwavo neShoko raMwari uye hwaro hwaMwari. Kusvibisa hunhu hwevanhu ava ndiyo kiyi huru apo Satani anorigira pasi vakarurama kuti arigire pasi kurudziro yavanoyo muvanhu.
Renje reSahara riri kukurira kuchamhembe sezvo sango rinonaya mvura rekumadokero kweAfirca, rakaratidzwa neruvara rwegirini mumepu inotevera, riri kutemerwa pasi.
Izvi zvinokonzeresa kunyangadzakukuru nekuti marenje ava panzvimbo dzenzvimbo dzaimbova nemiti nezvibereko.
Apo maKristu anotenda kuBhaibheri ari kusairirwa kurutivi mumakereke mazuva ano, zvitendero zvemasangano zviri kuparadzira kunyangadza kwehuchenjeri hwevanhu hwakafanana neKushanduka kwevanhu vachibva mumhuka, (Evolution), Big Bang nezvimwe zvitendero zvisimo muMagwaro zviri kuramba zvichikura.
Mapisarema 92:12 Akarurama achamera somuchindwe; Achakura somusidhari paRebhanoni.
Vanhu vari kusimuka vachimukira hwaro hunodiwa naMwari mavari. Makereke anoramba Shoko rakanyorwa kana richiramba nekupikisa tsika dzemasangano avo uye mafungiro avo. Vakarurama, vanorarama neMagwaro, vanomhurwa nekurigirwa pasi nevanhu vanoziva kusvibisa hunhu hwevanhu.
Mutungamiri wenyika yeAmerica Trump akazadzisa zvakaprofitwa muBhaibheri zvekuita Jerusarema guta guru reIsraeri. Anomhurwa nekukasika nevanhu vazhinji vacho pasi rese kusanganisira vanodaidzwa kuti nyika “dzemaKristu” vanokotamisa uso mukuedza kwavo kuramba Bhaibheri ravo vachifadza maMosiremu anotevera Muhammed.
Chiprofita ichi chinoreva zvinhu zvakawanda.
Nhasi Mosiki yaOrmar neDome of the Rock zvakamira panzvimbo tsvene paive pakambomira Tembere yaSoromoni.
Hakuna vanotenda kuBhaibheri vanofanira kureverera chitendero chakatsanangurwa naJesu nemazwi aya. Vanotenda kuBhaibheri vanofanira kureverera Israeri asi maKristu mazhinji anhasi vanoshaiwa hushingi kuti vamire neIsraeri vachipikisa mafungiro enyika.
Mutungamiri wenyika yeAmerica Trump anotadza, sezvatinoita isu tese, asi kumira kwake kunodakadza achivhikirira chokwadi cheBhaibheri nekutsigira Israeri pachiso cheruvengo rwepasi rese uye kumhurwa kwayo muenzaniso unodakadza kuti titevere. Uye maitiro evanoita zvematongerwo enyika vekuBritain neGermany vane nyika dzakambobereka vamutsiridzi vanoshamisa vakaita saMartin Luther naJohn Wesley, ndihwo humbowo hwekutsanangura kunoita Bhaibheri nguva yekereke yedu yekupedzisira yeRaodikia sebofu, inenhamo nehurombo. Bhaibheri rinoendererawo mberi kutaura kuti Raodikia yabereka maKristu ave marutsi mumuromo maMwari. Ndiko kutukwa kwemaKristu anopfugamira Allah. MaKristu ekereke yekutanga aisarudza kudyiwa neshumba vasati varamba kutenda kwavo.
Chiprofita ichi chinorevawo Roma yechipegani yaive pasi panaKesari.
Mukuedza kwavo kuvaka rusvingo rwakapoteredza Jerusarema, maRoma vari pasi pemukuru wemauto Tito muna 70 AD, vakatema miti yese kwemamaira gumi nerimwe (makiromita anoda kukwana 17 nehafu) kupoteredza guta. Nyika yakabva yaratidzika senyangadzi. Vakabva vaparadza Tembere neguta. MaJuda anosvika miriyoni rimwechete nezviuru zana vakafa pakurwiswa uku. MaRoma akaita seakasima nyangadzi zvino pavakaona kuti hakuna chaive chasara vakabva varudaidza kuti “runyararo”.
Nyangadzi yeRoma yechipegani yakabva yapindira mukereke yeRoman Catholic ikazopararira kupinda munevemasangano vanoipikisa. Tarisai Kisimusi, shoko risimo muMagwaro. Nezuva 25 Zvita risimo muMagwaro rinowanikwa pakati penguva yechando pakunenge kuchitonhora, zvekuchena chando. Zvisingagoneki kuti vafudzi vave vari panze nemakwai avo husiku. Asi raive zuva rakazvarwa mwari wezuva weRoma izvozvi rakaitwa zuva remhemberero huru dzechitendero mumakereke emasangano sezuva rekuzvarwa kwaJesu Kristu. Saka chitendero chechipegani chakapinda zvakanakisawo mukereke chikatongamo. Makambofungawo here kuti maIsita egi nemaIsita bhani akabva kupi? Hazvina kubva muBhaibheri.
Asi Mwari vakavimbisa mvura yemweya yekutanga (inova mvura yedzidziso) nemvura yekupedzisira kana yekukohwa yekupedzisa nguva yekereke yedu yeRaodikia.
Jeremia 5:24 "Havati mumoyo yavo, `Zvino ngatitye JEHOVA Mwari wedu, unotipa panguva yazvo mvura yokutanga neyokupedzisira, iye unotichengetera mavhiki akatarwa okukohwa.
Mvura yekutanga ndiyo mvura yedzidziso yekuzivisa zvakavanzika zveMagwaro kwatiri kuti mbeu yechokwadi iberekwe. Tinofanira kuziva zvakanyorwa muBhaibheri kuti tidzivirire tsika dzechipegani patinogadzirira Kuuya kwaShe.
Mvura yekupedzisira imvura yekukohwa apo mbeu dzinobviswa padavi radzakaberekwa. Nhanho yekutanga ndepanobviswa vatsvene vakafa munguva yemakore 2000 enhorondo yekereke mumakuva avo murumuko runouya.
Zvino vanorarama vanobva vamutswa nekutinhira kunomwe kwakavanzika voshandurwa kupihwa miviri yakafuka kusavora.
Zvino, ndicho chikonzero nhasi chekuti rumutsiridzo rwatinofanira kuva narwo .... tine rumutsiridzo rwemasangano; hatisati tawana kusanganiswa kwakakwana. Kwete, kwete, kwete, baba. Musafunge kuti takamutswa. Hatisati. Oh, vane mamiriyoni nemamiriyoni nemamiriyoni enhengo dzekereke, asi hapana rumutsiridzo zvachose. Kwete, kwete.
Mwenga haasati amutswa. Mazviona? Hapana ati amutswa, hapana kuonekwa kwaMwari achisanganisa Mwenga wake. Mazviona? Takatozvitarisira. Zvichatora kutinhira kunomwe kusina anoziva nezvako kuti kumumutse. Mwari achakutumira. Akavimbisa kudaro. Zvino, zvino, tarirai. Zvino, Mwenga akanga akafa.
Zvino Mwenga akazara achabviswa panyika kuti asangane naShe mumakore. Izvi zvchapedzisa mvura yekupedzisira inova mvura yekukohwa.
Mutumwa uyu anouya pasi panyika rini?
Mutumwa wechinomwe achapihwa mharidzo yaizvozvo, nekuti rinotaura kuti panguva yenzwi renguva yekereke yechinomwe --- mutumwa wechinomwe, kana akunzwikwa, zvakavanzika zvaMwari zvese zvichapedziswa nekutaura kwake. Zvino kana zvaziviswa, Mutumwa anouya panyika kubva kuDenga, anova Kristu (zvino rangarirai, mutumwa uyu ari panyika, inhume). Kristu anobva auya kubva kudenga (Munomuona muChitsauko chegumi chaZvakazarurwa), achiisa tsoka imwe panyika imwe pamusoro pegungwa, murarabungu pamusoro pemusoro wake, meso ake, akaita --- netsoka dzake sembiru dzomoto nezvimwe zvakadaro, anosimudza ruvoko rwake achipika naiye anorarama nekusingaperi- peri pachigaro chovushe, kuti nguva haizovipo zve.
Mutumwa wechinomwe anofanira kutanga azivisa zvakavanzika zvese zveMagwaro. Zvino mumashure mekuziviswa uku (kwakapera muna Zvita 1965) ndipo pachauya Mutumwa mukuru panyika.
Mutumwa Mukuru anouya kuzoitei panyika?
Asi, rangarirai, kana zvikaenda mumumvuri werufu, “ndini rumuko nehupenyu; ndichamumutsa zvakare.” Uye kana Mukuru akauya pasi akabaira hoko pasi, ipapo, “nguva haizovipi zve.” kana Mutumwa, wekuna Zvakazarurwa Chitsauko 10, aisa tsoka yake imwe panyika imwe mugungwa nemurarabungu pamusoro pemusoro wake, Anopika, “nguva haizovipo zve.”
MaKristu kubva munguva nomwe dzemakereke akavigwa panyika kana mugungwa.
Zvino Kristu anouya seMutumwa Mukuru kuzomutsa vakafa.
Kutaura kuviri kunokosha kwakashandiswa apa:
“Akadanidzira nenzwi guru” uye “Wakati adanidzira”.
Kutaura kwese kuri kuviri kunoshandiswa muBhaibheri panguva dzinomutswa vakafa.
Saka Mutumwa anomutsa vakafa kubva zvese panyika nemugungwa.
Kudanidzira kweMutumwa mukuru ndiko kunomutsa vakafa.
Mumufananidzo wevasikana gumi, vose vaive varara vakotsira kusvikira mhere-mhere yavamutsa.
Mateo 25:5 Zvino chikomba chakati chichinonoka vakakotsira vose vakavata.
Mateo 25:6 Pakati povusiku vakanzwa mhere-mhere, tarirai chikomba chovuya, budai mumuchingamidzei!
Mhere-mhere panguva yekumutswa kwevakafa inomutsa makereke ese vakachenjera nevakapusa. Vakachenjera vega ndivo vanozoita mafuta akakwana kuti vawane mwenje wakakwana kuti vaverenge Shoko rakanyora muBhaibheri vachitevera makwara akavanzwa muBhaibheri.
Mumashure memhere-mhere iyi, Kutinhira kunomwe kusina kunyorwa muBhaibheri kunobva kwatungamirira Mwenga anorarama kuti ashandurwe agamuchire muviri mutsva kuti vagone kukwira kudenga kunosangana naShe mumakore.
Hamugoni kugamuchira “kutenda kwekukwira kudenga” kusvikira mava nemiviri mitsva. Muviri mutsaru watinawo haugoni kukwira kudenga zvachose.
Tinofanira kuva takamuka zvakazara uye tichiziva Magwaro kuti titevere makwara atinopihwa neKutinhira kunomwe. Izvozvi tinofanira kuva tichidzidza Bhaibheri zvakazara kuti tigogona kuziva makwara eMagwaro atichapihwa.
Mapoka emharidzo vakafanofungidzira kuti Hillary achakunda sarudzo dzemutungamiri wenyika dzeUSA dzemuna 2016 vakaratidza kuti vakarasana zvakadii nemafungiro aMwari sezvo vakaramba Magwaro vachitevera zvakataurwa nevanhu.
Hapana pakavimbiswa neBhaibheri “Izwi raMwari” panguva yekupedzisira. Asi izwi remutumwa wechinomwe uye izwi reMutumwa mukuru.
1 VaTesaronika 4:16 Nokuti Ishe amene uchaburuka kudenga nokudanidzira, nenzwi romutumwa mukuru, nehwamanda (trump) yaMwari; vakafa munaKristu vachatanga kumuka;
Pekutanga kudanidzira. Izwi remutumwa wechinomwe rinozivisa zvakavanzika zvakanyorwa muBhaibheri rakabva kudenga. Zvaanotaura, zvichidzoserwa kuBhaibheri, zvinozivisa chokwadi chakavanzwa muBhaibheri.
Zvino izwi reMutumwa mukuru rinouya kuzomutsa vakafa.
Zvino hwamanda yaMwari kuzodana Mwenga kuti akwire kudenga.
Tarirai zviratidzo zvenguva. “Hwamanda” (Trump) akakunda sarudzo semutorwa akazara akabva aratidzira kushinga kukuru kudarika vamwe vatungamiri venyika vemazuva ano kunze kwa Truman akaita Israeri nyika muna 1948 naNixon akadzivirira Israeri muna 1973 muhondo yepaYom Kippur. Bhaibheri rinotaura nezvehwamanda (trump) yaMwari rotaura kuti vakafa muna Kristu vachamutswa. Izvi zvinoita sekuti igwara riri pachena repatasvika munhorondo, tava pedyo kwazvo nekumutswa kwevakafa. Takanzwa zita rekuti “Trump” richitaurwa kubva mugore 2016 munhau dzepasi rese. Hatingataure kuti Mwari haana kutiyambira.
65-1204 Kukwira KuDenga mukubwaira kweziso
Chinhu chekutanga chinouya, paanotanga kuburuka kubva kudenga, kune kudanidzira. Chii ichocho? Imharidzo, yekuunganidza vanhu. Mharidzo inouya, pekutanga, Zvino, nguva yekugadzirisa mwenje, “mukai mugadzirire mwenje yenyu.” Kudanidzira; zvino izwi; zvino hwamanda.
Kudanidzira: mutumwa achigadzirira vanhu.
Pechipiri izwi rekumutsa vakafa: izwi rimwechete iri, ndiro, izwi guru kuna Johane 11:38-44 rakadaidza Razaro kubva muguva.
Kuunganidza Mwenga: zvino kumutswa kwevakafa mazviona, kuti vakwire kudenga mukubwaira kweziso. Zvino tarirai zvinhu zvitatu zvinoitika. Chii chinotevera? Hwamanda. Izwi ... kudanidzira; izwi; hwamanda.
Zvino, chinhu chechitatu, ihwamanda. Iyo, yagara, pamitambo yehwamanda, inodaidza vanhu kuti vauye kumutambo. Uye ichi chichave chirayiro cheMwenga, Chirayiro cheGwaiana neMwenga waro kudenga.
Hosea 6:3 Ngatimuzive, ngatishingaire kuziva JEHOVA; kubuda kwake kwakatemwa sokwamangwanani; achauya kwatiri semvura, semvura yokuteverera inodiridza nyika."
Ishe anotanga kuuya sekuziviswa kwezvakavanzika zveShoko rakanyorwa kuzotidzorera kune zvakatendwa nekereke yekutanga. Iyi ndiyo mvura yekutanga inotidzidzisa Bhaibheri, kwete tsika dzevanhu.
Joere 2:23 Naizvozvo farai, imi vana veZiyoni, mufarisise muna JEHOVA Mwari wenyu; nokuti anokupai mudzidzisi wokururama, uye anokunisirai mvura, mvura yokutanga nemvura yokuteverera, nomwedzi wokutanga.
24 Mapuriro achazara nezviyo, uye zvisviniro zvichapafuma waini namafuta.
Zvipenyu zvina zvinoparadza. Zvikamu zvina zvenyangadzi yakaparadza kereke yekutanga yeTestamente Itsva ikaisa kereke munzvimbo yakaipa yeNguva yeRima muna 312 AD kusvika 1520 AD. Zvino Mwari akavimbisa zvikamu zvina zvekudzorera kereke pakutanga. Kururamisirwa nekutenda zvinoreva kuporeswa. Kunatswa kana hutsvene. Rubapatidzo rweMweya Mutsvene. Zvino kuziviswa kwezvakavanzika zvaShoko rakanyorwa kuti tiwane nzvimbo yedu muzano raMwari rekupedzisira.
Chinhu chikuru chinoitwa nemiti kudzoreredza mamiriro ekunze. Kabhoni dhayokusaidhi (CO2) muchadenga ndiyo chikonzero chikuru chinoipisa denga yatinoti girobhari womingi uye kushanduka kwemamiriro ekunze.
Miti inotora kabhoni dhayokusaidhi iyi (CO2) yoparadza kabhoni (C). Kabhoni (C) inobva yachengetwa mubazi remuti apo okisijeni inenge yasara (O2) inoburitswa kuitira kunatsa mhepo yatinofema.
Saka miti inobvisa zvakanaka mweya wekabhoni kubva muchadenga medu. Izvi zvinodzikisa njodzi yekuipiswa kwemuchadenga kwegirobhari womingi.
Muti wakafanana nemunhu akarurama uyo huvepo hwake hunoderedza kuita kwevanhu kwezvivi. Kururama kunowedzera kunaka kwehunhu hwevanhu.
Fotosinthesisi inotora nekuchengetedza simba rechiedza.
Saka miti inoshandura simba rechiedza chezuva kuriita chikafu painobereka michero.
Shizha reruvara rwegirini rinotora simba rechiedza chezuva. Mvura inotorwa nemidzi yemuti kubva muvhu.
Chero muti une ruvara rwegirini unotora kabhoni dhayokusaidhi yakashata muchadenga yoshandura kabhoni (C) kuita chikafu, kazhinji kuita shuga. Shizha rinobva raburitsa mweya unofemeka wakanaka weokisijeni wakakoshera kufema kwedu nemhuka. Kuita uku kwese kunodaidzwa kuti fotosinthesisi.
Kristu paCalvari, akatora zvivi zvenyika akatisuka kubva kuzvivi akatipa Mweya Mutsvene unova hupenyu husingagumi.
Hakuna munhu anokwanisa kudzokorora munana wakaitwa naJesu pakufa kwake, kuvigwa kwake, nekumuka kwake kubva kuvakafa.
Munana wefotosinthesisi, usingagoni kutevedzerwa nevesainzi, ndiwo unotsigira hupenyu zvizere panyika.
Kemikari rinoita izvi ndiro ruvara rwegirini rwatinoti kirorofiri.
Zvidimbu zvemukati zvekirorofiri zvinoratidzika sezviri pamufananidzo unotevera:
Chinhu chinodakadza apa maatomi mana enaitirojeni (N) akapoteredza magineziyamu iri pakati (Mg).
Magineziyamu yakaitwa nezvinhu makumi maviri nezvina. (mapurotoni gumi nemaviri nemanyuturoni gumi nemaviri).
Chimiro ichi chinotiyeuchidza chiratidzo chekudenga chakaonekwa naJohane kuna Zvakazarurwa Chitsauko 4.
Zvakazarurwa 4:6 … napakati pechigaro chovushe, napamativi ose echigaro chovushe, pakanga panezvisikwa zvina zvipenyu, zvizere nameso mberi neshure kwazvo.
Meso anotaura pamusoro pehungwaru. Zvisikwa zvipenyu izvi zvaiziva zvinhu zvakadarika uye zvaiziva zvinhu zvaizoitika. Ava ndivo varindi vakapoteredza chigaro chaMwari chevushe vanochenetedza kereke mukati memakore 2000 enhorondo yekereke.
Tarirai kurongwa kwazvo. Zvisikwa zvipenyu zvina zvakapoteredza chigaro chevushe chiri pakati. Semaatomi mana enaitirojeni (N) akapoteredza magineziyamu iri pakati (Mg) mukirorofiri.
Kune varume makumi maviri nevana vagere vakapoteredza chigaro chevushe. Vapostora gumi nevaviri veTestamente Itsva (naPauro achitsiva Judasi) nevanegumi nevaviri vemarudzi aJuda veTestamente Yekare.
Arufabheti yemaGiriki ine mavara makumi maviri nemana. Jesu ndiye Shoko. Testamente Itsva yakanyorwa muchiGiriki vachishandisa mabhii makumi maviri nemana earufabheti.
Zvino, chinonyanya kunakidza, tinoona kuti atomi remagineziyamu rine zvidimbu makumi maviri nezvina. Mapurotoni gumi nemaviri nemanyuturoni gumi nemaviri.
Roketi reSaturn V ndiro raive roketi rinoenda kumwedzi rine simba zvakanyanya muAmerica.
Tarirai kurongwa kwarakaitwa. Maekizositi mana akaiswa akapoteredza ekizositi rechishanu. Iyi ndiyo yaive nzira yakanakisa yaishandiswa nemainjiniya emuchadenga kuti vabate simba iri rese pakusimuka kwaro.
Hupenyu isimba rinoshamisa. Maatomi mana enaitirojeni akapoteredza magineziyamu yepakati ndiyo nzira mamiriro ezvinhu panyika anobata nawo hupenyu. Nzira iyi inodzika kubva kudenga yoshandiswa nemashizha ese manyoro ane ruvara rwegirini kugadzira chikafu.
Zvino tinodya michero nemirivo kuti tiwane hupenyu kubva kwazviri.
Tinodawo kufema mweya weokisijeni watinopihwa nemashizha egirini.
Okisijeni iyi yakakosha uye inobva mumapapu medu nemasero eropa dzvuku mutsinga dzedu. Mumana wekutakura okisijeni muropa unoitwa nemasero eropa dzvuku nekuti ane moreku rinodaidzwa kuti haemu.
Chikamu chemukati mehaemu chinoratidzika zvinoshamisa sezvakaita chikamu chemukati mekirorofiri.
Musiyano mukuru ndewekuti atomi repakati rinodaidzwa kuti ayoni (Fe kana kuti ferrumi muchiLatini, chitauro cheRoma yemapegani) ayoni iyi ndiyo inoitisa ropa kuti rive neruvara rutsvuku.
Ayoni inotakura okisijeni kuenda mumasero emuviri.
Zvino simba gurusa risati rakamboonekwa rakaratidzirwa pamuchinjikwa. Ndipo Jesu paakakurira Satani, zvivi, hadhesi uye guva. Ndiyo hondo huru yakarwiwa ikakundwa nekukunda kukuru.
Zvivi zvedu zvakaregererwa kana tikazvisuka nekutenda muRopa raJesu rakadeuka pamuchinjikwa.
Zvakazarurwa 1:5 NokunaJesu Kristu, chapupu chakatendeka, dangwe kuvakafa, mubati wamadzishe enyika. Kuna iye wakatida akatisuka, pazvivi zvedu neropa rake,
Jesu paakafa, Mweya Mutsvene waive Hupenyu hwaive muRopa rake, wakabuda kuti Mweya Mutsvene uuye ugare mumoyo yedu yakatendeuka wotibvisa kuzvivi nekutitungamirira muzvokwadi.
Jesu pamuchinjikwa ndiye aive pakati. Mauto mana evaRoma aive akamira akapoteredza muchinjikwa, vakamiririrwa nemaatomi mana enaitirojeni akapoteredza ayoni.
Johane 19:23 Zvino varwi vakati varovera Jesu pamuchinjikwa, vakatora nguvo dzake, vakaita migove mina, murwi mumwe nomumwe mugove wake;
Asi hushe hweRoma mumufananidzo waDanieri wemuHedeni hwaive hwakamiririrwa nemucherechedzo wemakumbo edare.
Saka dare (ayoni) mucherechedzo wehushe hweRoma. MaRoma akadeura ropa raJesu Kristu.
Musoro wendarama waive mucherechedzo weBabironi. Chipfuva nemavoko vaive vaMediani nevaPesia. Dumbu nezvidya zvebhurasi aive maGiriki. Makumbo edare (ayoni) zvaive zvidimbu zvekumabvazuva nekumadokero zvehushe hweRoma.
Masimba eDenga anogara mumoyo yedu kana tikagamuchira Jesu saShe neMuponesi wedu kuti agare matiri.
Moyo une zvikamu zvina.
Zvikamu zvina zvemoyo zvinomiririra zvisikwa zvipenyu zvina zvakapoteredza chigaro chaMwari chevushe.
Tichiwedzera, moyo wakapoteredzwa nembabvu makumi maviri neina. Sechimiro chiri kuDenga nevarindi vana nevakuru makumi maviri nevana vakapoteredza chigaro chepakati chevushe.
Tinogonawo kudzidza Evangeri rakati rerukei racho muzvimiro zvezvinomera nemiti.
Zvinomera nemiti zvine ndudzi mbiri dzembeu.
Mbeu yehupenyu ngatitii yenyemba yakaitwa nezvikamu zviviri, zvinodaidzwa kuti dikoti (dicot). MaKristu anowana hupenyu husingagumi nekuzvarwa patsva. Kuita uku kwakafanana nekuzvarwa kwemwana apo mwana anotanga kukura mudumbu raamai vake ozvarwa, mwana otanga kuzvifemera pachake.
Munhu anotendeuka nekutenda ogamuchira Jesu seMuponesi wake. Munhu uyu anobva aona kuti mweya wake wasukwa kubva kuzvivi muRopa raJesu. Izvi zvinowanisa mutendi nzvimbo kuDenga kana akafa. Ruponeso runowanikwa nekutenda kwete nemabasa. Mwari anoisa mugove weMweya wake mutsvene mumoyo wemunhu iyeye. Ngatiti wakakura sechigunwe chake chihombe. Kana munhu iyeye akafa, chikamu chiduku cheMweya Mutsvene waive maari chinotora mweya wake wakaregererwa chonoudzosera kuna Mwari.
Mukadzi mucherechedzo wekereke. Kereke yechokwadi inodaidzwa kuti Mwenga waKristu.
MaKristu akaponeswa akamiririrwa nemucherechedzo wemhandara muBhaibheri, vakadzi vakachena.
Asi kune vasikana vakangwara nevakapusa mumufananidzo wevasikana gumi kuna Mateo Chitsauko 25.
Dambudziko remuKristu akaponeswa nderekukura munyasha kusvikira ava chikamu chevasikana vakangwara vanoziva zvakakwana zveBhaibheri kuti vasanyengerwe netsika dzemakereke nemifungo yevanhu.
Munhu akaponeswa paanokura muhutsvene, mugove weMweya Mutsvene uri maari unokurawo. Munhu uyu, nekuda kwekushaiwa ruzivo rweBhaibheri, anokurudzirwa zvakanyanya netsika dzekereke yaanenge ari nemifungo yevanhu vanoitungamirira. MaKristu kazhinji anoda kuva nembiri pakati pevanhu vekereke saka vanotenderana navo pane zvese zvavanotaura. Uku ndiko kuneta kukuru kune vanhu kwekuti tinoda kugamuchirwa musangano uye tinoita chero chatingaite kuti tigamuchirwe.
Nekuponeswa uye kutanga kudzidza zvimwe zvinhu pamusoro pehutsvene, zvakanaka sezvo tichivimba munaJesu. Dambudziko nderekuti munhu, anenge ava mukereke, anenge akutambura chero chitendero (chichechi-chechi) chekereke yaanenge achienda. Semuenzaniso, kune nzira zhinji dzinoshandiswa parubapatidzo rwemvura. Munhu iyeye anopedzisira akubapatidzwa nechero nzira inotendwa mairi nekereke yaanenge apinda iyoyo. Dai akapinda mune imwe kereke yakasiyana neiyi, vangadai vaibapatidzwawo nenzira yakasiyana. Izvi zvinoratidza kuti makereke edu emasangano haana kugadzikika. Rubapatidzo rumwechete chete rwemvura ndirwo rwakanaka. Kumwe kwese kubapatidza kunoitwa manyepo hakusiko.
Kereke imwe neimwe inokurudzira vanhu vayo kuti vasagare pedyo nevanhu vanovapikisa, kunyanya kana vapikisi ivavo vachibvunza mibvunzo yavasingagoni kudavira. Munhu akanaka anotevera Tiriniti (shoko risimo muBhaibheri) anotenda kuti Mwari baba munhu akasiyana naMweya Mutsvene anokurudzirwa kuti asatambire pedyo nevaya vanoti kana Mweya Mutsvene ari ndiye akaisa Mbeu yeHupenyu mumimba maMaria, zvino chokwadi Mweya Mutsvene ndiwo Baba vemuviri waKristu. Mweya Mutsvene naMwari baba vanofanira kuva Munhu mumwechete. Hakuna Mwana anogona kuita vanababa vaviri.
Saka kunzi muri wekereke makomborero akasangana nekuipa sezvo vanhu mukereke vanodzidza zvese dzidziso dzakanaka nedzakaipa.
Rubapatidzo rweMweya Mutsvene ndipo apo Mweya waKristu unenge uri mumunhu unenge wakura zvekuti Kristu ndiye anenge akutonga munhu iyeye. Apa ndipo munhu uyu anenge azvarwa patsva zvakakwana nekuti Mweya waKristu unenge wakugona kuzivisa zvakavanzika zveBhaibheri kumunhu iyeye. NaJesu ari Ishe wavo, vanhu vanenge vogona kuwana chokwadi cheBhaibheri uye zvivindi zvekupokana nemapasita vanova misoro yemakereke. Izwi rekuti pasita (mufudzi) rakataurwa kamwechete muTestamente Itsva. Hapana pakataurwa neBhaibheri kuti mufundisi, pasita akanzi mufudzi muBhaibheri redu reShona ndiye mufudzi wemakwai anorehwa nezwi rekuti shepadhi kuChirungu. Hapana muBhaibheri pakanzi pasita ndiye musoro wekereke. Jesu ndiye Musoro wekereke, uye munhu akazadzwa neMweya chete ndiye anokwanisa kutenderana nazvo.
Kuzvarwa patsva muMweya Mutsvene kuripo kupa munhu mumwe nemumwe muono wakadzama mumagwaro uye zvivindi zvekupikisana nedzidziso dzakaipa. Izvi hazviiti kuti munhu uyu ave nembiri. Kana tava vaShe tinotanga kuita nzara yechokwadi, kwete rudo rwekugamuchirwa nevanhu vanotenda kune zvakaipa.
Saka muKristu akazvarwa patsva anotanga kukoshesa nekuisa hupenyu hwake paTestamente Itsva neTestamente Yekare. Iyi ndiyo migove miviri “yedikoti” (dicot) yeMbeu yeHupenyu husingagumi.
Johane 16:1 Asi kana asvika, iye Mweya wazvokwadi, uchakutungamirirai muzvokwadi yose;
Mweya Mutsvene mumunhu unobva watungamirira munhu iyeye kupfurikidza kumuzivisa zvakavanzika zveMagwaro kuti azive zvaanofanira kuita uye zvaanofanira kutenda mazviri kuti akunde kuva Mwenga waKristu.
Vasikana vakangwara vane mafuta mumwenje yavo (Mweya Mutsvene) kuti vawane chiedza. Chiedza ichi chinofanira kupenyera pane chimwe chinhu choita kuti chionekwe kana kubuda pachena. Chimwe chinhu ichocho iShoko raMwari.
Humbowo hwerubapatidzo rweMweya Mutsvene ndiko kugona kunzwisisa zvakavanzika zveShoko rakanyorwa zvakavanzwa mumavhesi eBhaibheri. Kutsvaga uku hakuna magumo, kunoramba kuchienderera mberi kuchiburitsa zvakavanzika pachena.
MuKristu akazadzwa neMweya haatauri pamusoro pechero vhesi reBhaibheri achiti, “Harina kukosha”. Magwaro ese akanaka.
2 Timotio 3:16 Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari, runobatsira pakudzidzisa, nokuraira, nokururamisa, nokuranga kuri mukururama
Chinhu chese chakanyorwa chakanyorwa nekuda kwechikonzero. Vaya vasina hanya nekutsvaga zvikonzero zvazvakanyorerwa havangorina hanya naJesu. Saka havagoni kuzoita Mwenga wake. Ndiye Shoko saka tinofanira kuva nehanya nezvese zvake, kana tichida kuwanana naye.
Vanhu vanotenda kuMharidzo vanoti hama Branham havana kubvira vataura pamusoro perimwe vhesi saka hatigoni kuriziva. Vari kungotaura kuti rudo rwavo pamusoro pemazwi akataurwa nevanhu mumakore anodarika makumi mashanu akadarika kubva pakufa kwehama Branham rwakavapofomadza, zvekuti semamwe masangano havatokwanisi kunzwisisa Magwaro zvachose. Saka vanoratidza kuti havana mafuta akakwana kuti vaite mwenje wakakwana kuti vaone Shoko raMwari. Chavari kungotaura ndechekuti ndivo vasikana vakapusa.
Asi kune rimwe boka iro Mwari arikutendeukira kwariri. Boka rakasarudzika rinotaurwa nezvaro neBhaibheri. MaJuda. Munguva dzemakereke vakaramba Testamente Itsva vakatenda kuTestamente yekare chete. Izvi zvinovaita mbeu ine rutivi rumwechete chete, runodaidzwa kuti “monokoti (monocot muChirungu)” sembeu yechibage.
Mamonokoti (maJuda) havana mudzi mukuru wepakati unodzika pasi asi vane midzi miduku yakapararira inodaidzwa kuti faibharasi (fibrous).
Mukati memakore 2000 enhorondo yekereke, kubva maRoma pavakadzinga maJuda muParesitina, kutenda kwemaJuda kwakasangana neshanduko dzakawandisa apo vatungamiri vakasiyana-siyana vakasimuka vachivakurudzira nekurudziro dzakasiyana-siyana nguva dzakasiyanawo. Hakuna chitendero chechiJuda chimwechete. Vanotenda kuturikirwa nekutsanangurwa kwakasiyana kwetsika dzinovakwa kubva paTestamente Yekare.
Vatendi vechiHedeni (madhikoti), zvisinei nekukanganisa kwese kwemasangano emakereke, vane chipo cheruponeso kupfurikidza kutarisira kuna Jesu seMuponesi. Saka maKristu ane mudzi wepakati wakadzika (tepirutu) wavanogona kubatirira pauri. Jesu ndiye mudzi wepakati wakareba, nekuti ndiye akakosha pazano reruponeso. Isu tiri midzi yemumativi yakabatirira pamudzi wepakati wakadzika wetepirutu. MaKristu ese anofanira kuva nechinhu chimwechete chakafanana pavari, Jesu Kristu akafira zvivi zvedu paCalvari. Zvinoita kuti ave iye oga nzira yekuenda kudenga.
Kana tikacheka nepakati pedavi remuti unobva pambeu yedhikoti (dicot) (inomiririra kereke), tinoona kuti machubhu anofambisa hunyoro kuenda kumuti nekudzika akarongwa mumasumbu anoburitsa denderedzwa.
Izvi mucherechedzo wekereke ichitangira pamusoro ichizorasika muNguva yeRima apo rimwe rinoenda pasi kuruboshe. Zvino sumbu iri rinobva rasimuka kurudyi pavanodzokera pakutanga pavakatangira. Uyu mucherechedzo wakanakisa wekudzoserwa kwekereke pakutenda kweTestamente Itsva kwekereke yekutanga.
Davi remonokoti (rinomiririra maJuda) rine machubhu akapararira mucherechedzo wekupararira kwakaita maJuda pakati pemarudzi kwemakore anoda kukwana 2000.
Mashizha emuti wedhikoti (kereke) ane tsinga dzakawanda dzinobva patsinga yepakati. Izvi zvakare mucherechedzo wekuti maKristu akabatirira pahukama hwavo naKristu.
Asi kereke yemaKristu yakafamba ichidarika nguva dzakasiyana ikatarisana nezviitiko zvakasiyana-siyana nenzira dzakasiyana munhorondo yayo.
Mashizha emamonokoti (maJuda) haana tsinga yepakati inobatanidza dzimwe dzese. Tsinga dzawo dzese dzinofamba dzakaparadzana.
MaJuda akapararira nepasi rese, akagona kuchengetedza chiJuda pasi rese. Havamedzwe netsika dzenyika dzavari. Vanobatira nyika idzodzo zvakanaka, zvisinei nekuti kazhinji vanozorwadziswa nekuuraiwa. Nzira dzavo dzakaparadzana nenzira yekuti maJuda mazhinji kubva pasi rese akadzokera kunyika yavo yeChipikirwa Paresitina kunomirira Messiasi wavo. “Gore rinotevera muJerusarema” kwaive kuchema kwaivapa tariro mumazana emakore ekugoverwa kwavo.
Nyeredzi yaDavidi ndiyo mureza wavo. Davidi ndiro zita rakwegurisa zvakanyanya rinoyanana nemureza wenyika nhasi.
ChiHeberu ndicho chitauro chakwegurisa chinotaurwa panyika nhasi.
Hakuna rumwe rudzi rwakambodzingwa munyika yarwo kwemakore anoda kukwana 2000 rukazodzoka kuzodzorera pakare nyika yarwo yaive yadzikisirwa kuitwa renje uye yava nenhamo huru vasipo.
Hakuna rumwe rudzi rwakambosangana nekurwadziswa kwakadaro, kumanikidzwa kubva munyika yarwo, kutorerwa zvavaive nazvo, nekurwadziswa kwehumhondi munyika zhinji.
Tsinga dzakaparadzana dzinoratidza kuti vakasangana nekuomerwa kwakafanana nekuvengwa pavairarama munzvimbo dzakasiyana pasi rese uye vaidzoswa nechinangwa chakafanana kunyika yavo yeChipikirwa.
Maruva anodakadza kwazvo.
Maruva emonokoti (maJuda) ane mapetari matatu kana matanhatu. Vakaramba Messiasi wavo nezvipikiri zvitatu pamuchinjikwa.
Pavakasarudza kuzadzisa Magwaro vakadzokera kunyika yavo yeChipikirwa, vakabva vasarudza sechiratidzo chavo nyeredzi yaDavidi ine minongedzo mitanhatu.
Ruva remonokoti rine mapetari matanhatu.
Nyeredzi yaDavidi ineminongedzo mitanhatu. Chiratidzo cheIsraeri yanhasi.
Ruva redhikoti (kereke) rine mapetari mana kana mashanu.
Chiverengo chechina ndicho chinoyanana nemuchinjikwa.
Urwu ndirwo rudzikinuro rwepanyika pano.
Mapetari mashanu paruva redhikoti.
Jesu akagamuchira maronda mashanu kubva kudare reRoma, zvipikiri nemunondo.
Maronda akaitwa nezvipikiri maviri mutsoka dzake. Maronda akaitwa nezvipikiri maviri mumavoko ake. Neronda rimwechete repfumo parutivi pake.
Iri ndiro Ropa rakatiponesa uye rinotirapa kubva kuhurwere. Idzi ndidzo Nyasha.
Kuti muite muti muduku webonsai usingakuri, vanocheka mudzi wepakati unodzoka pasi. Muti uyu unobva watanga kuita midzi miduku chete inopararira. Midzi isingadziki pasi inoita kuti muti usakure. Muti unozofanana nemuti mukuru asi uri panzvimbo imwechete.
Muti muduku webhonsai uri kuruboshwe nemidzi yawo isina kudzika.
Jesu ndiye Shoko raMwari, saka kana maKristu vakasadzidza Bhaibheri ravo zvakakwana vakafuratira mamwe Magwaro vachiti anorwisana kana kuti haana basa, vanenge vachicheka hukama hwavo naJesu zvinomisa kukura kwavo kwemweya voramba vari panzvimbo imwechete.
Kutenda kuri kudiwa naJesu hakusi kwekuti vanhu vanotaura kuti vanotenda munaMwari asi vanhu vari kutenda zvakanyorwa muBhaibheri.
Bhaibheri ndiwo mudzi wepakati wakadzika unosimbisa kutenda kwedu, mudzi wepakati uyu unodzoka kuita muduku patinoti hazvina basa kuziva zvinorehwa nemamwe mavhesi eBhaibheri.
“Tinofanira kuziva here?” “Hazvikanganisi kuponeswa kwangu”. Uku ndiko kuita kukuru kwatinoshandisa kana tichida kuviga kusaziva kwedu pamusoro peBhaibheri. Hakuna chinokanganisa kuponeswa kwenyu kana makatendeuka zvechokwadi mukagamuchira Jesu seMuponesi wenyu.
Hatisi kutaura pamusoro pekugadzirira chirayiro chemuchato. Chero munhu achave mwenga anotaura achiti haana basa nezvimwe zvinhu pamusoro pemurume wake (Shoko) anoita seachatadza kukokwa kuchirayiro chemuchato.
MaKristu akaponeswa chete ndivo vachakokwa kuchirayiro chemuchato kuna Ruka 14. Asi hakuna mumwe wavo acharayira chirayiro ichi nekuti vanoisa tsika dzekereke yavo nezvido zvavo pamberi peShoko raMwari.
Nekudupukisa hanya dzavo pamusoro pezvakavanzika zveBhaibheri zvinoziviswa, maKristu anhasi ava semiti yebonsai paBhaibheri. Vava vana vaduku paruzivo rweBhaibheri, vanotozivikanwa nekusaziva kwavo zvakanyorwa muBhaibheri.
“Handizivi uyezve handina basa nekuzviziva”.
Mutsara wekurumbidza kusaziva.
Kereke yeRaodikia yakataurwa kuti ibofu. Zvinosuwisa kuti makereke anhasi ari kuzadzisa chiprofita ichi.